Ny Vantage Telestream dia afaka manampy ireo mpampita vaovao amin'ny fanatanterahana arofanina nomerika haingana kokoa | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » Ny Vantage Telestream dia afaka manampy ireo mpampita vaovao amin'ny fanatanterahana arofanina nomerika haingana kokoa
Ny sombintsombin'ny horonantsary noforonin'ny famoronana dia misy lanjany fa tsy amin'ny hafatry ny marika ihany. Saingy ny kalitao ankapobeny izay anehoana azy dia ahafahany manatratra mpihaino amin'ny bitika bebe kokoa. Miankina amin'ny kalitao sy ny habetsahany, ny fitantanana ny votoatiny dia mety ho toy ny haingam-pandeha toy ny fizotran'ny famoronana azy, indrindra amin'ny tontolo ekolojia nomerika izay mitohy hatrany ny fitomboana. Izany no tian'ny orinasa iray Telestream dia tonga eo amin'ny sary, toy ny nataon'izy ireo nandritra ny roa taona lasa izay mpanome rindrambaiko. Telestream manatsotra ny fizotran'ny haino aman-jery nomerika an'ny mpampiasa nomerika, ary miaraka amin'ny sehatra fanolorana ny haino aman-jery, toerana, azo antoka ny mpamorona ny votoatiny hanana fotoana mora kokoa hitantanana ireo lakan-tsary ao ambadiky ny atiny lahatsary.
Hatramin'ny 1998, Telestream dia manam-pahaizana manokana amin'ny fampandrosoana ny vokatra izay ahafahana mahazo alalana fidirana an-dahatsary amin'ny haino aman-jery rehetra na inona na inona ny famoronana, fitsinjarana na fijerena fahitana. Nandritra ny fihetsiketsehan'ny haino aman-jery nomerika manontolo, hatramin'ny fisamborana hatramin'ny fahitana, ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny matihanina avo lenta Telestream ny Ny tsipika vokatra dia avy amin'ny singa desktop sy ny rindran-tsivalana amin'ny sehatr'asa mankany amin'ny rafi-pandaharana nomerika sy ny rafi-piasana nomerika.
Telestream manampy ny mpanjifany amin'ny fanomezana azy ireo ny tontolo iainana eo amin'ny sehatry ny asa izay manampy azy ireo bebe kokoa hampindrana ny lanjan'ny horonantsary. Ny orinasa ihany koa dia manome fitaovana an-tserasera nomerika mivantana sy an-tariby sy vahaolana amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana izay nahafahan'izy ireo sy ny orin'izy ireo nanova horonan-tsary amin'ny takelaka sy manerana ny orinasa.
Telestream ny ny tsipika dia manangana ny haben'ny haino aman-jery nomerika rehetra, ao anatin'izany ny fisamborana sy ny fanina; QC, fanodinana sy fitadiavana fanamafisana sy famindrana; captioning, playback ary fanaraha-maso, fanaterana, mivantana streaming; automatique workflow, sy ny analytics horonantsary ary antoka amin'ny serivisy ho an'ny làlam-piasana manontolo.
Telestream's Vantage Media Processing Platform
Telestream ny toerana sehatra fanodinana ny media dia ampiasain'ny tompon'ny votoaty, mpamokatra ary mpaninjara amin'ny fomba izay ahafahany mamindra, haingana, lafo, ary lafo vidy indrindra, hanova, hanova, fonosana, hanomezana vola, ary hizara ny media. Ity sehatra ity dia miorina amin'ny rafi-pandrafetana mampifanaraka amin'ny serivisy mampifanaraka amin'ny serivisy, ary miaraka amina serivisy fanaovan-tserasera sy ny mpampifandray izay mitambatra hamorona arofan'asa automatique mahery vaika eo ambany fanaraha-mason'ny rafitra. toerana manome serivisy izay misy:
Misambotra ny media
Ny fanodinana metadata
Fandinihana ny media
Fivoriana amin'ny votoaty
toerana Mampifandray seamless ny fampifangaroana ambaratonga amin'ny alàlan'ny rafitra fahatelo misy ny mpampitohy. Ny sehatra dia manome fahamatorana avy amin'ny rafi-dahatsoratra tsotra ho an'ny kompana sy serivisy serasera marobe izay manampy ireo mpampiasa hameno ny filàn'ny orin'izy ireo mitombo ankehitriny sy ho an'ny tanjona ho avy. toerana dia mihazakazaka amin'ny serivisy serivisy, off-the-shelf server, na ny LUpp®® haingam-pandeha an'ny GPU, izay mamela azy hampiasa tanteraka ny fahafahan'ny fotodrafitrasa IT misy ny sehatra ankehitriny sy ny fampiharana tsara indrindra.
ny toerana Ny vahaolana transcoding, workflow ary ny rafitra dia mampiasa ny teknolojia farany, izay mamela azy io hanolotra kalitao pristine, haingam-pandeha haingam-pandeha miavaka, ary koa ny rafi-pandrefesana làlam-pandehanana sy mahay manova ny làlan'ny indostria ho an'ny mpampiasa. toerana Ny fanodinana dia azo ampitampita avy amin'ny rafitry ny prise premier mankany amin'ny Cloud mba hahafahana mamaly haingana ny tampon'ireo fangatahana famokarana, na hizaha fitsapana vaovao momba ny orinasa.
Mianara bebe kokoa momba ny toerana amin'ny alàlan'ny fitsidihana www.telestream.net / toerana / overview.htm.
Maninona raha mandeha Telestream
Tao anatin'ny roa amby roapolo taona nahalany azy, Telestream dia teo amin'ny laharana fanavaozana teo amin'ny indostrian'ny sary nomerika izay efa mpisava lalana amin'ny transcoding horonantsary miorina ary fifanakalozana fifanakalozana avo lenta amin'ny tamba-jotra IP. Ny ifantohan'ny tariby an'ny orinasa amin'ny fanavaozana mitohy dia avy amin'ny horonan-tsarimihetsika matanjaka sy ny fahitalavitra an'ny ekipa mpitantana azy, izay nahazoany tombony lehibe tokoa nanomboka tamin'ny 2001, ary tafiditra ao izany ny fampitomboana fitomboana indroa isa roa isan-taona manaraka. Ity karazana fahombiazana ity no namela Telestream famatsiana ara-bola fito momba ny fahazoan-dàlana stratejika izay nanitatra ny fahaizany transcoding ary koa namela azy hiditra ao amin'ny streaming mivantana, QC, analytics video ary habaka antoka ho an'ny serivisy. Telestream mandroso ny indostria ankehitriny amin'ny alàlan'ny fikajiana ny teknolojia fampivoarana lozisialy izay manampy amin'ny fanafainganana ny fanavaozana azy amin'ny tsena haingana sy mavitrika tokoa.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Telestream, Dia tsidiho ny www.telestream.net /telestream-home.htm.
Automated workflows Fivoriana amin'ny votoaty mpamorona votoaty alàlan'ny fantsom-baovao nomerika Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor fampidirana fitantanana ny votoatiny Fanaovan-gazety media capture Sehatra fanaraha-maso ny media Metadata manara-maso mpanome rindrambaiko Spears & Arrows Telestream Transcoding TV Technology toerana lahatsary virtoaly zava-misy votoaty hita maso 2020-04-29
Previous: Maso manokana
Next: Ruy Garcia Mifangaro Wendy sy Midsommar Miaraka NUGEN Audio